Tsy misy fandosirana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Tsy misy mandositra
Moa ve tsy maharary ny very asa sy miatrika ny fahasahiranana mety hitranga? Eny, fa ny finoana dia manome toky antsika fa Andriamanitra dia hanome izay ilaintsika (Mat. 6,25). Moa ve tsy maharary be rehefa mamoy olon-tiana? Mazava ho azy fa ny finoana dia manome toky antsika fa ho hitantsika indray io olona io miaraka amin’ny vatana vaovao ( 1 Kor. 1 Kor5,42).
Mora ve ny fitsapana na olana rehetra? Tsia, fa ny fitokiana an’Andriamanitra dia mandresy lahatra antsika fa tsy hamela antsika ho irery na oviana na oviana i Jesosy, na inona na inona zava-tsarotra mahazo antsika ankehitriny3,5). Faly Izy hanafaka antsika amin’ny enta-mavesatsika (Mat. 11,28-30). Tiany ny miaraka amin’izay matoky Azy (Salamo 37,28) ary arovy ny mino (Salamo 97,10).